कस्तो रहला तपाईको आइतबार? पाथिभारा माताको दर्शन गरि साउन १७ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Horoscop/कस्तो रहला तपाईको आइतबार? पाथिभारा माताको दर्शन गरि साउन १७ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
बृषः सुरुमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउन सक्छ । फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला । अरूको विश्वासमा पर्दा धो का हुन सक्छ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नाले यात्रा सम्भावना देखिन्छ । साँझदेखि परिस्थिति अनुकूल बन्नाले महत्त्वाकांक्षी काम गर्न सफल भइनेछ ।
मिथुनः आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन् । स्रोत–साधन जुट्नाले गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। पढाइको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ र लेखन कलामा निखारता आउनेछ । अध्ययनका लागि भ्रमणको मौका जुट्न सक्छ ।
आज ४ वैशाख २०७८, शनिवार : आजको राशिफल